Mareykanka oo Kuuriyada Woqooyi u sheegay inuusan cadow ku ahayn - BBC News Somali
Mareykanka oo Kuuriyada Woqooyi u sheegay inuusan cadow ku ahayn
Dowladda Mareykanka ma raadineyso in is beddel maamul uu ka dhaco Kuuriyada Woqooyi, sida uu sheegay xoghayaha arrimaha dibadda dalkaasi, iyadoo ay jiraan xiisado ka dhashay tijaabada hubka ee xukuumadda Pyongyang.
Rex Tillerson ayaa intaa raaciyay in Mareykanku uu doonayay wada xaajood.
Dhanka kale, xubin sare oo ka tirsan golaha senate-ka Jahhuuriga ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu ku fekeray in dagaal uu ku qaado Kuuriyada Woqooyi.
Xukuumadda Pyongyang ayaa sheegatay in gantaalkeedii ugu dambeeyay ee ay tijaabisay uu garaaci karo xeebta galbeed ee Mareykanka iyo wixii ka sii shisheeya.
Tillerson, ayaa u sheegay hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi in Mareykanku uusan cadowgiisa ahayn oo uusan dooneyn in xukunka laga tuuro, balse Pyongyang ay Mareykanka u jeedineyso hanjabaad aan la aqbali karin, taasna ay tahay inay ka jawaabaan.
Tijaabadii labaad ee gantaalka qaaradaha isaga gudb ee Kuuriyada Woqooyi ay Jimcihii tijaabisay, ayaa waxaa u dabaal degay hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un.
Madaxweyne Trump ayaa marar badan ku cambaareeyay Shiinaha oo xad la leh Kuuriyada Woqooyi isla markaana ah saaxiibkeeda dhaqaale ee ugu dhow, inaysan wax badan ka qaban in Kuuriyada Woqooyi ay ka joojiso barnaamijkeeda hubka.
Si kastaba, khubarro badan ayaa aaminsan in xukuumadda Pyongyang aysan awood u lahayn in hubkeeda nugliyeerka ay u beddesho gantaallada riddada dheer, isla markaana ay hubiso in la ilaaliyo ilaa halka loogu talo-galay ay gaaraan.
Waxay sheegayaan in inta badan gantaallada Kuuriyada Woqooyi aysan si sax ah u beegsan karin halka loogu talo-galay.
Iyadoo ay taasi jirto, ayaa kuwo kalena waxay aaminsan yihiin in xukuumadda Pyongyang ay ka gudbi karto caqabadahaas ayna ku horumarin karto hubkeeda nugliyeerka muddo 5 ilaa 10 sano gudahood ah, kaas oo garaaci kara Mareykanka.